လက်ရှိဘောလုံးလောကရဲ့ ကစားသမားတွေထဲမှာ ဂိုးသွင်းအများဆုံးက ဘယ်သူလဲ
လက်ရှိဘောလုံးလောကမှာ ဂိုး(၄၀၀)ကျော် သွင်းယူထားတဲ့ ကစားသမားများ
24 Aug 2018 . 2:51 PM
ဘောလုံးလောကမှာ ဂိုး(၄၀၀)ကျော် သွင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ခုပါ။ အရင်တုန်းက ဘရာဇီးလ်ဂန္ထ၀င် တိုက်စစ်မှူးကြီး ပီလီ Pele ဆိုရင် ကစားသမား ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ဂိုး(၁၀၀၀)ကျော် သွင်းခဲ့တဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်း ရရှိဖူးပေမယ့် တခြားဂန္ထ၀င်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ မာရာဒိုနာ Maradona ၊ ရိုမာရီယို Romario ၊ ယိုဟန်ခရိုက်ဖ် Johan Cruyff တို့တောင် အဲဒီလောက်အထိ မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြဘူး။ အခု မော်ဒန်ဘောလုံးလောကမှာတော့ နည်းစနစ်တွေ ပိုမြင့်မားတာကြောင့် အဲဒီလောက် ဂိုးအရေအတွက် မပြောနဲ့ ဂိုး(၄၀၀)ကျော် သွင်းဖို့တောင် အရမ်းခက်သွားပါပြီ။ ဒါကြောင် အဲဒီလို ခက်ခဲတဲ့ မှတ်တမ်းကို ရယူခဲ့ပြီး လက်ရှိဘောလုံးလောကမှာ ကျင်လည်နေကြတဲ့ ကစားသမားတွေကို ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် . . . . .
ဒေးဗစ်ဗီလာ David Villa (၄၁၅ ဂိုး)
စပိန် ၀ါရင့်တိုက်စစ်မှူးကြီး ဒေးဗစ်ဗီလာဟာ ဥရောပဘောလုံးမြေကနေ ပျောက်ကွယ်သွားတာ နှစ်အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ အခုလောလောဆယ် အမေရိကန် မေဂျာလိဂ်ကလပ် နယူးယောက်စီးတီးအသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ ဗီလာဟာ အသက်(၃၆)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်လို့ ကစားသမားဘ၀ နေ၀င်ချိန်ကို ရောက်နေပြီဖြစ်ပေမယ့်လည်း တစ်ချိန်တုန်းကတော့ သူဟာ စပိန်ဘောလုံးလောကရဲ့ ဂိုးသွင်းစက်တစ်လုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။ စပိန်အသင်းအတွက် သူ သွင်းယူခဲ့တဲ့ (၅၉)ဂိုးစံချိန်ကို အခုအထိ ဘယ်သူမှ မချိုးဖြတ်နိုင်သေးပါဘူး။
ဆွာရက်ဇ် Suarez (၄၃၀ ဂိုး)
ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် မတူညီတဲ့ လိဂ်(၄)ခု (ဥရုဂွေး၊ နယ်သာလန်၊ အင်္ဂလန်၊ စပိန်) မှာ ဂိုးသွင်းဖူးတဲ့ မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ အသက် (၃၁)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဆွာရက်ဇ်ဟာ ဥရောပသွင်းဂိုးအများဆုံး ရွှေဖိနပ်ဆု (ESM)ကို (၂)ကြိမ် ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး အခု ဘာစီလိုနာအသင်းမှာလည်း ခြေစွမ်းပြ ဂိုးတွေသွင်းယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
အီဘရာဟီမိုဗစ် Ibrahimovic (၅၀၅ ဂိုး)
ကစားသမား ဘ၀တစ်လျှောက် (၈၇၆)ပွဲကစား (၅၀၅)ဂိုး သွင်းထားတဲ့ ဆွီဒင် နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှူးကြီး အီဘရာဟီမိုဗစ်ဟာ အခု စာရင်းမှာ တတိယနေရာ ရရှိခဲ့သလို ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် ဂိုးပေါင်း (၅၀၀)ကျော် သွင်းယူခဲ့တဲ့ (၂၈)ဦးမြောက် ကစားသမားအဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ မတူညီတဲ့ အသင်း(၆)သင်း (အေဂျက်စ်၊ ဂျူဗင်တပ်စ်၊ အင်တာမီလန်၊ ဘာစီလိုနာ၊ အေစီမီလန်၊ PSG ) အတွက် ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမား၊ မတူညီတဲ့ လိဂ်(၄)ခု (နယ်သာလန်၊ အီတလီ၊ စပိန်၊ ပြင်သစ်)မှာ အမှတ်ပေးဖလား(၁၂)ကြိမ်အထိ ရခဲ့တဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ကစားသမား စတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
မက်ဆီ Messi (၆၄၆ ဂိုး)
ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် မက်ဆီထက် ဂိုးအရေအတွက် ပိုသွင်းခဲ့တဲ့ ကစားသမားက (၆)ဦးသာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အာဂျင်တီးနားအသင်းအတွက် အောင်မြင်မှု မရခဲ့ပေမယ့်လည်း ဘာစီလိုနာနဲ့အတူ ဆုဖလား (၃၃)ခုအထိ ရရှိခဲ့ပြီး Ballon d’Or ဆု အပါအ၀င် တစ်ဦးချင်း အကောင်းဆုံးဆုတွေကိုလည်း ရယူထားသူပါ။
စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo (၆၇၆ ဂိုး)
လက်ရှိ ဘောလုံးလောကမှာ ကျင်လည်နေတဲ့ ကစားသမားတွေထဲ စီရော်နယ်လ်ဒိုက သွင်းဂိုးအများဆုံးအဖြစ် ဦးဆောင်နေပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ကလပ်အသင်း ကစားသမားဘ၀မှာ (၅၇၃)ဂိုး၊ နိုင်ငံအသင်းအတွက် (၈၅)ဂိုး သွင်းယူထားပြီး ရီးယဲလ်အသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် သွင်းဂိုးအများဆုံး၊ ပေါ်တူဂီအသင်းအတွက် သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခု ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေကတော့ လက်ရှိဘောလုံးလောကမှာ ရှိနေတဲ့ ကစားသမားတွေထဲက သွင်းဂိုး အများဆုံးဖြစ်နေသူတွေပါပဲ။ ကလပ်အသင်းအတွက် သွင်းခဲ့တဲ့ ဂိုးတွေ၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှာလည်း လူငယ်အသင်းက စပြီး လက်ရွေးစင်အသင်းကြီးအတွက် သွင်းခဲ့တဲ့ ဂိုးအရေအတွက်ကိုပါ ထည့်သွင်း တွက်ချက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Akhayar Sports ပရိသတ်တွေလည်း ကိုယ်အားပေးတဲ့ ကစားသမား ဂိုးဘယ်လောက် သွင်းထားလဲဆိုတာ သူများကို ကြွားလို့ရအောင် ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖော်ပြလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် . . .
လကျရှိဘောလုံးလောကမှာ ဂိုး(၄၀၀)ကြျော သှငျးယူထားတဲ့ ကစားသမားမြား
ဘောလုံးလောကမှာ ဂိုး(၄၀၀)ကြျော သှငျးနိုငျဖို့ဆိုတာ မလှယျကူတဲ့ စှမျးဆောငျရညျတဈခုပါ။ အရငျတုနျးက ဘရာဇီးလျဂန်ထဝငျ တိုကျစဈမှူးကွီး ပီလီ Pele ဆိုရငျ ကစားသမား ဘဝတဈလြှောကျလုံး ဂိုး(၁၀၀၀)ကြျော သှငျးခဲ့တဲ့ စံခြိနျမှတျတမျး ရရှိဖူးပမေယျ့ တခွားဂန်ထဝငျကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ မာရာဒိုနာ Maradona ၊ ရိုမာရီယို Romario ၊ ယိုဟနျခရိုကျဖျ Johan Cruyff တို့တောငျ အဲဒီလောကျအထိ မစှမျးဆောငျနိုငျခဲ့ကွဘူး။ အခု မျောဒနျဘောလုံးလောကမှာတော့ နညျးစနဈတှေ ပိုမွငျ့မားတာကွောငျ့ အဲဒီလောကျ ဂိုးအရအေတှကျ မပွောနဲ့ ဂိုး(၄၀၀)ကြျော သှငျးဖို့တောငျ အရမျးခကျသှားပါပွီ။ ဒါကွောငျ အဲဒီလို ခကျခဲတဲ့ မှတျတမျးကို ရယူခဲ့ပွီး လကျရှိဘောလုံးလောကမှာ ကငျြလညျနကွေတဲ့ ကစားသမားတှကေို ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ . . . . .
ဒေးဗဈဗီလာ David Villa (၄၁၅ ဂိုး)
စပိနျ ဝါရငျ့တိုကျစဈမှူးကွီး ဒေးဗဈဗီလာဟာ ဥရောပဘောလုံးမွကေနေ ပြောကျကှယျသှားတာ နှဈအတျောကွာခဲ့ပါပွီ။ အခုလောလောဆယျ အမရေိကနျ မဂြောလိဂျကလပျ နယူးယောကျစီးတီးအသငျးမှာ ကစားနတေဲ့ ဗီလာဟာ အသကျ(၃၆)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈလို့ ကစားသမားဘ၀ နဝေငျခြိနျကို ရောကျနပွေီဖွဈပမေယျ့လညျး တဈခြိနျတုနျးကတော့ သူဟာ စပိနျဘောလုံးလောကရဲ့ ဂိုးသှငျးစကျတဈလုံးဖွဈခဲ့တယျ။ စပိနျအသငျးအတှကျ သူ သှငျးယူခဲ့တဲ့ (၅၉)ဂိုးစံခြိနျကို အခုအထိ ဘယျသူမှ မခြိုးဖွတျနိုငျသေးပါဘူး။
ဆှာရကျဇျ Suarez (၄၃၀ ဂိုး)
ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ မတူညီတဲ့ လိဂျ(၄)ခု (ဥရုဂှေး၊ နယျသာလနျ၊ အင်ျဂလနျ၊ စပိနျ) မှာ ဂိုးသှငျးဖူးတဲ့ မှတျတမျးကောငျးတဈခု ပိုငျဆိုငျထားသူပါ။ အသကျ (၃၁)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈတဲ့ ဆှာရကျဇျဟာ ဥရောပသှငျးဂိုးအမြားဆုံး ရှဖေိနပျဆု (ESM)ကို (၂)ကွိမျ ဆှတျခူးခဲ့ပွီး အခု ဘာစီလိုနာအသငျးမှာလညျး ခွစှေမျးပွ ဂိုးတှသှေငျးယူနဆေဲဖွဈပါတယျ။
အီဘရာဟီမိုဗဈ Ibrahimovic (၅၀၅ ဂိုး)
ကစားသမား ဘဝတဈလြှောကျ (၈၇၆)ပှဲကစား (၅၀၅)ဂိုး သှငျးထားတဲ့ ဆှီဒငျ နာမညျကြျောတိုကျစဈမှူးကွီး အီဘရာဟီမိုဗဈဟာ အခု စာရငျးမှာ တတိယနရော ရရှိခဲ့သလို ဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျ ဂိုးပေါငျး (၅၀၀)ကြျော သှငျးယူခဲ့တဲ့ (၂၈)ဦးမွောကျ ကစားသမားအဖွဈ ရပျတညျနပေါတယျ။ ခနျြပီယံလိဂျမှာ မတူညီတဲ့ အသငျး(၆)သငျး (အဂေကျြဈ၊ ဂြူဗငျတပျဈ၊ အငျတာမီလနျ၊ ဘာစီလိုနာ၊ အစေီမီလနျ၊ PSG ) အတှကျ ဂိုးသှငျးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမား၊ မတူညီတဲ့ လိဂျ(၄)ခု (နယျသာလနျ၊ အီတလီ၊ စပိနျ၊ ပွငျသဈ)မှာ အမှတျပေးဖလား(၁၂)ကွိမျအထိ ရခဲ့တဲ့ တဈဦးတညျးသော ကစားသမား စတဲ့ ဂုဏျပုဒျတှလေညျး ပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။
မကျဆီ Messi (၆၄၆ ဂိုး)
ဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျ မကျဆီထကျ ဂိုးအရအေတှကျ ပိုသှငျးခဲ့တဲ့ ကစားသမားက (၆)ဦးသာ ရှိခဲ့ပါတယျ။ အာဂငျြတီးနားအသငျးအတှကျ အောငျမွငျမှု မရခဲ့ပမေယျ့လညျး ဘာစီလိုနာနဲ့အတူ ဆုဖလား (၃၃)ခုအထိ ရရှိခဲ့ပွီး Ballon d’Or ဆု အပါအဝငျ တဈဦးခငျြး အကောငျးဆုံးဆုတှကေိုလညျး ရယူထားသူပါ။
စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo (၆၇၆ ဂိုး)
လကျရှိ ဘောလုံးလောကမှာ ကငျြလညျနတေဲ့ ကစားသမားတှထေဲ စီရျောနယျလျဒိုက သှငျးဂိုးအမြားဆုံးအဖွဈ ဦးဆောငျနပေါတယျ။ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ကလပျအသငျး ကစားသမားဘဝမှာ (၅၇၃)ဂိုး၊ နိုငျငံအသငျးအတှကျ (၈၅)ဂိုး သှငျးယူထားပွီး ရီးယဲလျအသငျး သမိုငျးတဈလြှောကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး၊ ပျေါတူဂီအသငျးအတှကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး ကစားသမားလညျးဖွဈပါတယျ။
အခု ဖျောပွခဲ့တဲ့ ကစားသမားတှကေတော့ လကျရှိဘောလုံးလောကမှာ ရှိနတေဲ့ ကစားသမားတှထေဲက သှငျးဂိုး အမြားဆုံးဖွဈနသေူတှပေါပဲ။ ကလပျအသငျးအတှကျ သှငျးခဲ့တဲ့ ဂိုးတှေ၊ နိုငျငံတကာအဆငျ့မှာလညျး လူငယျအသငျးက စပွီး လကျရှေးစငျအသငျးကွီးအတှကျ သှငျးခဲ့တဲ့ ဂိုးအရအေတှကျကိုပါ ထညျ့သှငျး တှကျခကျြထားတာဖွဈပါတယျ။ Akhayar Sports ပရိသတျတှလေညျး ကိုယျအားပေးတဲ့ ကစားသမား ဂိုးဘယျလောကျ သှငျးထားလဲဆိုတာ သူမြားကို ကွှားလို့ရအောငျ ဗဟုသုတအနနေဲ့ ဖျောပွလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ . . .